Inona ny atao hoe Marketing Predictive?
Talata, Oktobra 13, 2015 Saturday, May 7, 2016 Douglas Karr
Ny talen-kevitry ny marketing amin'ny database dia ny ahafahanao mamakafaka sy manome isa ny vinavina miorina amin'ny fitovizany amin'ireo mpanjifanao. Tsy toerana vaovao io; efa am-polony taona vitsivitsy izahay no nampiasa data mba hanaovana izany. Na izany aza, nampijaly ny fizotrany. Nampiasa fitaovana fitrandrahana, fanovana ary enta-mavesatra (ETL) izahay hisintonana angona avy amina loharano marobe hananganana loharanon-karena afovoany. Mety haharitra herinandro maro vao vita, ary ny fangatahana mitohy dia mety maharitra amam-bolana vao mivoatra sy mizaha toetra.
Mandrosoa haingana ankehitriny ary miha-marimarina kokoa ireo fitaovana, mihamitombo kokoa ny algorithman, ary ny valiny dia mandeha ho azy sy mihatsara. Tatitry ny Everstring, Ny tatitra momba ny fanadihadiana momba ny varotra momba ny varotra 2015, ny fihaonan'ireo singa telo dia nahatonga ny fitomboan'ny marketing mialoha ny vinavina:
Betsaka ny angon-drakitra - Ny tantara momba ny fividianana, ny fitondran-tena ary ny angona demografika dia azo alaina avy amina loharano marobe.
Ny maha-tokana ny fidirana - miditra amin'ny angon-drakitra mivantana amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana saika rehetra mifamatotra sy mifandray dia manome hetsika manankarena sy tena izy.
Ny fahatsoran'ny rahona - ny hery informatika goavambe amin'ny alàlan'ny rahona, ny teknolojia angon-drakitra tahiry angona vaovao miaraka amina algorithma manankarena sy be pitsiny no manampy amin'ny fanavaozana ny sehatry ny varotra mialoha.
Inona no atao hoe Marketing mialoha
Ny varotra mialoha dia ny fakana ny mombamomba ny angona mpanjifa efa misy hamaritana lamina iray ary haminavina ny ho avy sy ny fironana amin'ny ho avy. Source: Ny tatitra momba ny fanadihadiana momba ny varotra momba ny varotra 2015
Ny angona dia natambatra ho an'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao, ny algorithma dia namboarina tamin'ny fotoana tena izy, ary ny firaka dia isaina amin'ny fitadiavana vokatra ara-barotra. Ary koa, ny loharanom-pahalalana sy ny loharanom-pahalalana ho an'ny mpihaino dia azo refesina mba hampivelatra ny fampielezan-kevitra misy valiny mialoha.
Mbola tanora anefa ny fananganan-jaza ara-barotra mialoha. Manodidina ny 25% amin'ireo namaly no nilaza fa manana CRM ifotony, ary 50% mahery no nilaza fa nanam-bola tamin'ny automatisation marketing na nitady vahaolana. Ny 10% amin'ireo namaly ihany no nilaza fa mampifandray ny CRM sy mandeha ho azy amin'ireo teknolojia hafa izy ireo mba hitarika ny valin'ny orinasa. Mbola lavitra ny lalan-kalehantsika!
Izany dia nilaza fa manome vahana ny fomba fijery. 68% amin'ireo namaly no nilaza fa mino ny varotra mialoha dia ho singa iray tena ilaina amin'ny fametahana marketing mandroso. Ny ankamaroan'ireo mpamaly ireo dia niasa tamin'ny orinasa orinasa niaraka tamin'ny ekipa mpivarotra maherin'ny 50. 82% amin'ireo orinasa nanolo-tena hanao scoring mialoha dia mikaroka momba ny varotra mialoha.
Tsy siansa tonga lafatra izy io, fa manana ny fahaizana mampitombo ny fifampitokisana, ny firotsahana ary ny fiovam-po eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra atsy ho atsy. Ary izany dia mandeha ho an'ny valin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing ary koa ny fifamatorana amin'ny ekipan'ny varotrao. Zavatra manaitaitra. Matt Heinz, Filoha, Heinz Marketing.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fifandraisana misy eo amin'ny marketing mialoha sy ny anton-javatra toy ny haben'ny ekipa marketing, ny haben'ny orinasa ary ny fahamatoran'ny marketing:
Sintomy ny tatitra momba ny fanadihadiana momba ny varotra State of Predictive 2015
Sintomy ny tatitra ho an'ny valin'ireto fanontaniana manaraka ireto sy ny maro hafa:
Hatraiza ny fahaizana matotra sy teknolojia no mpivarotra antonony?
Firy ny mpivarotra no mampiasa marketing mialoha mialoha?
Ahoana ny fampiasan'ny mpivarotra ankehitriny ny marketing mialoha?
Ahoana ny fiantraikan'ny haben'ny orinasa, ny haben'ny ekipa ary ny paikadin'ny marketing amin'ny fahamatorana ara-barotra sy ny fampiasana ny marketing mialoha?
Momba ny EverString
EverString mamela anao hanangana fantsom-pifandraisana sy hampitombo ny tahan'ny fiovan'ny mpanjifa miaraka amin'ilay faminaniana momba ny fantsona feno sy miorina amin'ny kaonty fotsiny Analytics vahaolana ho an'ny varotra & varotra. Ny EverString Decision Platform dia fanolorana SaaS mora ampiharina izay mifamatotra amin'ny fampiharana marketing sy CRM efa misy mba hahafantarana ny mampiavaka ny kaontinao tsara indrindra.
Tags: 2015lehibeeverstringheinz marketingSary torohaymatt heinzvarotra mialohaisa azo vinavinainafanjakan'ny varotra mialoha
Torohevitra momba ny 10 LinkedIn momba ny fahombiazan'ny tambajotra
Singa famolavolana mailaka miisa 5 mampitombo ny tahan'ny Click-Through
26 Okt 2015 amin'ny 7:16 PM
Lahatsoratra mahafinaritra. Ny deraiko. Regards, Karel Paragh